Home Wararka Rooble oo Safiirka Ingiriiska kala hadlay Arrimaha doorashooyinka
Rooble oo Safiirka Ingiriiska kala hadlay Arrimaha doorashooyinka
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaabilay Safiirka Dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya Kate Foster oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka, dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho iyo Beledweyn iyo xaaladaha bani’aadminimo iyo gurmadka abaaraha dalka ka jira.
Safiir Kate Foster ayaa Ra’iisul Wasaaraha uga tacsiyeysay dadkii waxyeelladu ka soo gaartay weerraradii ka dhacay Muqdisho iyo Beledweyn iyadoo sheegtay in Britain ay ku garab taagan tahay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed dadaalkooda xaqiijinta nabadda dalkooda.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xaqiijiyay in ay ka go’an tahay in qeybaha ka harsan doorashooyinka dalka oo gebogebo maraya ay ku soo dhammaadaan si nabad ah.
Previous articleSanbaloolshe oo Xildhibaan loo doortay lana kulmay Cali Guudlaawe
Next articleSomalia: UN human rights expert to conduct first visit
Xaalad adag oo ka jirta Gobolka Hiiraan!!
Hirshabeelle oo war cad kasoo saartay hadal kasoo baxay Wsaaarada Arrimaha...